Mozika Rap : Mitohy ny fifaninanana « End of the weak »
Efa nanomboka ny fiandohan’ny volana. Mbola mitohy ny fifaninana karakarain’ny kolontsaina Mainty, ka hifantenana izay hisolo tena an’i Madagasikara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena atao Prague, any amin’ny repoblika Tchèque. Isaka ny tapa-bolana no hanaovana ny fifantenana …Tohiny
Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny fanambarana nataon’ny Sendikan’ny Mpiandry fonja farany teo mitaky ny hampidirana an’i Claudine any Antanimora. Handray ohatra avy hatrany isika mba hisian’ny adihevitra matotra sy mipetraka manoloana izany fanambarana nataon’ny Sendikan’ny Mpiandry …Tohiny
Raha miara-dia hatrany tamin’ny mpanakanto hafa no nahafantarana azy hatramin’izay, hisedra irery ny sehatry ny Piment Café Behoririka anio alina i Fara Kely. Andriambavilanitra mpanakanto fantatra amin’ny feomangany. Karazana gadona samihafa no entiny amin’io seho …Tohiny
Voafonja eto Madagasikara : Miisa 8205 no miandry fitsarana
Taorian’ny antontan’isa navoaka amin’ny ankapobeny dia fantatra fa miisa 8205 ireo gadra naiditra am-ponja vonjimaika, miandry ny fitsara na azy, manerana ireo fonja 82 misy eto Madagasikara. Mahatratra 20240 kosa no fitambaram-ben’izy ireo amin’izao fotoana …Tohiny